Nosy Koh Phai, Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist - Ny tora-pasika tsara indrindra any Pattaya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Ko Phai Island
Nosy Koh Phai na Nosy Bamboo
Nosy Koh Phai Pattaya
Fampijaliana ny nosy Koh Phai
Ity nosy ity dia ao amin'ny vondronosy Mu Koh Phai ao atsinanan'i Thailand. Koh Phai dia manana ny anaram-bosotra hoe "Nosy Bamboo". Eto ianao dia afaka mankasitraka ny toetra tsy fantatra amin'ny endriny, mandehana milentika ary mandry amin'ny torapasika tena tsara.
Toetoetran'ny Nosy Koh Phai
Ity nosy ity dia ao amin'ny faritanin'i Chonburi. 4 km ny halavany ary 1,5 km ny sakany. Maherin'ny antsasaky ny faritany voasarona ny hantsana mideza feno zavamaniry tropikaly.
Tsy misy ny kafe iray, hotely, na trano fivarotana mihitsy, izany hoe ny fotodrafitrasa any Koh Phai dia tsy ao tanteraka. Nanapa-kevitra ny governemanta Thai fa handrara ny fananganana na inona na inona amin'ity nosy ity. Ny tanjon'ny fandrarana dia ny fitazonana ny toetra tsara indrindra.
Ny morontsirak'i Koh Phai dia rakotra fasika fotsy tsara tarehy.
Ny moron-dranomasina fotsy an'i Koh Phai
Ny pebbles dia tsy hita na aiza na aiza. Madio ny ranomasina eto, manana fy turquoise mahafinaritra. Mihombo ny hazo palmie any amoron-tsiraka, ka ny taratry ny masoandro tsy matahotra ny fialan-tsasatra. Noho ny toerany tsara tarehy, io nosy io dia malaza amin'ny modely sy mpaka sary.
Tsy matory an'i Koh Phai ianao!
Noho izany, mipetraka amin'ny trano fisakafoanana iray, mankasitraka ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra dia tsy hiasa eto. Ary na tsy misy toerana aza fatoriana ao Koh Phai. Ny nosy dia mitandrina hatrany, izay, rehefa avy ny maizina, dia mandroaka ny mpizahatany hiala eto. Fa milomano, ny filentehan'ny masoandro, ny fisakafoanana no mahazo eto.
Snorkeling sy misitrika ao Koh Pha
Misaotra ny rivotra madio, ny feo mahafinaritra amin'ny surf sy ny tontolo milamina ary afaka mamerina ny fifandanjana ara-batana sy ara-tsaina mandritra ny ora maro ianao.
Koh Phai avy any Pattaya
Tokony hampatsiahivina fa tsy misy teboka ahafahana manofa fitaovana ihany koa. Ka amin'ny diving scuba dia tsy maintsy entinao any amin'ny nosy miaraka aminao, miaraka amin'ny lamba famaohana, sunblock, sns.
Koh Phai Fahafahana
Famonoana rava ao Koh Phai
Ny tena manintona an'i Koh Phai dia ny fahasimban'ny Navy. Any akaikin'ny nosy amin'ny halalin'ny 28 m no tadiavin'ny divers mijery azy ao anatiny. Ho fiarovana azo antoka, nesorina tao anaty sambo ny zavatra rehetra manana tendron-tsofina sy sisiny.
Khram HTMS - Famotehana ny ratra ao amin'ny Nosy Koh Phai
Ilaina ihany koa ny manokatra fampahalalam-baovao toa izany fa tsy nilentika io sambo io, fa nesorina tamina sambo navalin'i Thailandy tamin'ny 2003, ary tondradrano amin'ny alàlan'ny fananganana zavamaniry ao amin'ny faritra, ary an-dàlana handrosoana ny fiainana an-dranomasina.
Lighthouse amin'ny Koh Phai
Azonao atao koa ny miakatra ny lighthouse eny amin'ny vatolampy. Avy any no hisokatra ny fomba fijery tena tsara.
Panorin'ny Nosy Koh Phai
Afaka mandeha manarato ao Koh Phai ihany koa ianao. Ny nosy dia voahodidina vatohara be. Karazana trondro isan-karazany no hita marobe. Na ny vao manomboka aza dia afaka miankina amin'ny fisintonana tsara. Na izany aza, ho an'izany, ny fitaovam-panjono rehetra dia tsy maintsy entina miaraka aminao koa.
Koh Phai amin'ny sarintany
Ahoana ny fomba hidiran'ny Koh Phai Island
Ao amin'ny sambo
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana azy avy any Pattaya. Manomboka ao Koh Phai mankany amin'ny morontsirak'i Pattaya 26 km. Isan'andro dia misy ferry mandao Pattaya avy any Pattaya Pier, izay hita any amin'ny faritra atsimon'ny morontsirak'ity fivarotana ity. Mandeha manodidina ny 1,5 ora ny sambo, sakam-bola 2 eo ho eo ny tapakila.
Mety ho fanoloana hafainganam-pandeha dia mety ho sambo hafainganana. Ao amin'ny seranan-tsambon'i Pattaya dia misy toerana manofa trano hitaterana rano. Manodidina ny 40 $ dia afaka haingana any Koh Phai ao anatin'ny 20 minitra.
Nosy Koh Phai Video
Weather in Koh Phai Today + Forecast
Ny widget dia mampiseho ny toetr'andro ankehitriny ao Koh Phai. Afaka misafidy ny sosona tianao ianao (onja, rivotra, rahona ary maro hafa).